Cabasho ka dhalatay dilal wadareedyada Puntland fuliso | KEYDMEDIA ONLINE
Cabasho ka dhalatay dilal wadareedyada Puntland fuliso
Bannaan-bax looga soo hor jeedo xukun dil ah oo Maamulka Puntland ku riday dhallinyaro la sheegay in lagu helay Shabaabnimo ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ehellada qaar ka mid ah dhallinyaro uu shalay maamulka Puntland ku xukumay dil toogasho ah ayaa bannaan-bax ay arrinkaas kaga soo hor jeedaan ku dhigay iridda hore ee Madaxtooyada Soomaaliya, waxayna muujiyeen qanaaco la’aan.
Maxkamadda Ciidamada Puntland ee Gobollada Mudug, ayaa sheegtay in 8-da xukunsane ay ku caddaatay in ay yihiin shabakad ka tirsan Amniyaadka Al-shabaab, kuwaas oo dilal madax-jebin ah iyo qaraxyo ka geysan jiray Gaalkacyo, gaar ahaanna dhinaca Galmudug.
Hayeeshee, ehellada qaar ka mid ah dhallinyarada dilka lagau xukumay, ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay eedahaa Puntland, waxayna codsadeen in Maxakamadda sare ee dalka loo gudbiyo kiiskaan, si baarid rasmi ah oo madaxbanaan loogu sameeyo xukunsanyaasha.
Madaxda Dowladda Fadaraalka oo uu ugu horreeyo Ra’iisul Wasaaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, ayay ugu baaqeen inuu kiiskaan isha ku yahoo, waxayna caddeeyeen in ay ku qancayaan haddii DF ay carruurtooda ku hesho danbiyada ay galeen.
Qaar ka mid ah waalidka dhallinyarada la xukumay oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ilmahooda lagu qasbay in ay sheegtaan danbiyo aysan galin, kadib markii koronto lagu dhajinayay muddo todobo billod ah.
Dhawaan ayay aheyd markii Dowlad goboleedka Puntland ay dil toogasho ah ay ku fulisay 21 xubnood oo lagu helay in ay ka tirsanaayeen Kooxda Al-Shabaab, 21-kaas 18 ka mid ah waxaa lagu toogtay Gaalgacyo.